EXCLUSIVE : २६ मिनेटको भिडियोमा हेर्नुहोस् ग्लोबल आइएमइ बैंकको खाताबाट कसरी पैसा हरायो ? – Artha Sarokar :: Television Page
अर्थ सरोकार टिभी कार्यक्रम तालिका
अर्थ सरोकार टिभी कार्यक्रमबारे
EXCLUSIVE : २६ मिनेटको भिडियोमा हेर्नुहोस् ग्लोबल आइएमइ बैंकको खाताबाट कसरी पैसा हरायो ?
काठमाडौँ । काठमाडौँ बस्ने श्याम चौहानले ग्लोबल आइएमइ बैंक लिमिटेमा कारोबार गर्थे । काठमाडौँमा केनल हाउसको व्यवसाय गर्ने चौहानले व्यवसायकै क्रममा एकजना साथीलाई ग्लोबल आइएमइ बैंकको चेक दिए । आफ्नो खातामा कति पैसा राखेको छु भन्ने हेक्का राखेरै चेक दिएका उनको चेक ‘एकाउन्टमा पैसा छैन’ भनेर फिर्ता भएपछि उनी तीन-छक्क परे । त्यसपछि उनी बैंक गए । बैंक गएर बुझ्दा थाहा भयो कि उनलाई थाहा नै नदिई उनको खाताबाट पैसा सनराइज बैंकमा रहेको अर्को खातामा मोबाइल बैंकिङबाट ट्रान्सफर भएको रहेछ।
आफ्नो एकाउन्टमा रहेको मोबाइल नम्बर आफ्नो किर्ते हस्ताक्षर गरी कसैले परिवर्तन गरेर अर्कै एकाउन्टमा रकम ट्रान्सफर भएको थाहा पाएपछि उनी तनावमा परे । बैंकको अनामनगरस्थित शाखाबाट उनको नम्बर परिवर्तन भएको रहेछ भने त्यसो गर्न बैंकको कुपन्डोल शाखाबाट ‘अर्डर’ आएको रहेछ । कसैले ‘म नै श्याम चौहान हो’ र मेरो नम्बर परिवर्तन गरिदिनू भनेकै आधारमा त्यसलाई भेरिफाइ नै नगरी उनको मोबाइल बैंकिङमा प्रयोग भएको नम्बर परिवर्तन भएको रहेछ ।
प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०७६, शुक्रबार
उत्तरी नाकामा गिजोलिएको अर्थतन्त्र-१ : नाका बन्द हुँदा करोडपतिहरु ‘रोड’मा आए, तर हालखबर सोध्न सरकार आएन…
महालक्ष्मी बिकास बैंकको ‘सुनकाण्ड’को नालेबेली : बैंकका कर्मचारीको ‘खुरापात’ देखेर प्रहरी नै छक्क ! (भिडियो)
बैंक अफ दी एयरको अवार्ड पाएको एनएमबि बैंक भौचरको फोटोकपिको ५०० रुपैयाँ लिन्छ, अरु काण्ड त कति हो कति…! (भिडियो)
Exclusive: खारेज हुनुपर्ने रिलायबल नेपाल लाइफ र सन नेपाल लाइफ जनता झुक्याउँदै, बीमा समिति किन मौन ? (भिडियो)
Exclusive: १ रुपैयाँ पनि नलिइ करोडौंको ऋणी भए यिनीहरु…श्रीमान् जेलमै बिते, श्रीमतीको उठिबास (भिडियो)
Exclusive: बैंकका कर्मचारी विप्लवका कार्यकर्ताको नियन्त्रणमा, रिहा भएपछि दुवै पक्ष मिडियामा, भित्री कारण के ? (भिडियो)
अर्थ सरोकार टेलिभिजन कार्यक्रम अनुसन्धानमा आधारित नेपालको नम्बर १ आर्थिक टेलिभिजन कार्यक्रम हो । आर्थिक क्षेत्रमा हुने बिकृतिविरुद्ध खरो पत्रकारिता अभ्यासमा लागेका हामी छोटो समयमा नै स्थापित आर्थिक टेलिभिजन कार्यक्रम बन्न सफल भएका छौँ । हामी युट्युबमा सर्वाधिक हेरिने आर्थिक टेलिभिजन कार्यक्रम पनि हौँ । हाल बिजनेश टेलिभिजनमा हरेक आइतबार राती ८:३० बजे, र सोको पुन: प्रशारण सोमबार विहान ७:३० बजे, र विभिन्न समयमा अन्य माध्यमबाट पनि प्रशारण भइरहेको यो कार्यक्रमका लागि कुनै जानकारी, सूचना वा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई सिधै ९८५१०१७९१४ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।